လုံးဝကို WINDOWS 10 နှင့်အတူရုံး 365 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows ကို 10 ကနေ Office 365 ကို Remove
က "ထိပ်ဆုံးတစ်ဆယ်" တွင်, မသက်ဆိုင်အသုံးအနှုန်း၏, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအတွက်အကျွမ်းတဝင်သည် Microsoft Office ကိုများအတွက်အစားထိုးဖြစ်လာဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရသောရုံး 365 applications များ၏ဆောက်။ သို့သော်ဤအထုပ်တစ် subscription ကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘဲစျေးကြီးနှင့်များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ကကြိုက်နှစ်သက်မကိုမိုဃ်းတိမ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် - သူတို့ကဒီအထုပ်ကိုဖျက်ပစ်နှင့်ပိုပြီးအကျွမ်းတဝင်တပ်ဆင်ရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးကလုပ်ကိုကူညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Office 365 ကို Remove
အဆိုပါလုပ်ငန်းတာဝန်ပေါင်းများစွာနည်းလမ်းဖြေရှင်းနိုင်ပါသည် - မိုက်ကရိုဆော့ဖသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်း၏စနစ်တကျနည်းလမ်းကနေအထူး utility ကို၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Software ကို uninstall လုပ်ဖို့အကြံပြုကြဘူး: Office 365 ကိုတင်းကျပ်စွာစနစ်သို့ပေါင်းစည်းသည်, Third-party tools တွေကိုဖယ်ရှားသူမ၏အလုပ်ကိုနှောင့်အယှက်နိုင်ပြီး, ဒုတိယအ, Third-party developer များ၏လျှောက်လွှာနေဆဲလုံးဝကဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Method ကို 1: "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" မှ Uninstall
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်း၏အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - လျှပ်တပြက်သုံးပါ "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ"။ အောက်ပါ algorithm ကို:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Run ကို"အမိန့်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက် appwiz.cpl နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
ဒြပ်စင်စတင်ရန် "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ"။ အနေအထား installed applications များစာရင်းကိုအောက်ကိုဆင်း "Microsoft Office 365"ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနဲ့ click နှိပ် "ကိုဖျက်".
သင်တစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့ entry ကိုမတှေ့နိုငျလြှငျ, Method ကို2skip ။
အထုပ် uninstall လုပ်ဖို့သဘောတူသည်။
Uninstall အများ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပြည့်စုံသည်အထိစောင့်ပါ။ ထို့နောက်နီးစပ် "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" နှင့်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
ဤနည်းလမ်းကိုအပေါင်းတို့၏အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်ပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာအများဆုံးစိတ်မချရ, ဒီလျှပ်တပြက်အတွင်းအထုပ်ရုံး 365 ၏တစိတ်တပိုင်းပြသသည်မဟုတ်ကဲ့သို့၎င်း, သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းသုံးလို။
Method ကို 2: မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှ Tool ကို-ဖယ်ရှားမှုကို
အသုံးပြုသူများမကြာခဏဒီအထုပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စောဒကတက်, ဒါကြောင့်မကြာသေးမှီက developer များသင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Office 365 ကို uninstall လုပ်လိုက်မှခွင့်ပြုသည့်အထူး utility ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
အပေါ်ကလင့်ခ်ကိုသွားပါ။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Upload လုပ်ပါ" နှင့်မဆိုသင့်လျော်သောတည်နေရာမှာ utility ကို download လုပ်ပါ။
အားလုံးပွင့်လင်း applications များကိုပိတ်ပါ, အထူးသဖြင့်ရုံး, အဲဒီနောက် tool ကို run ။ ပထမဦးဆုံး window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
၎င်း၏အလုပ်လုပ်ဖို့ tool ကိုစောင့်ပါ။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင်၌ရှိ click လုပ်, သတိပေးမြင်ရပါလိမ့်မည် "Yes" ကို.
ပုံမှန်ဖျက်မှုကိုလုံလောက်အောင်မဖွစျလိမျ့မညျ, ဖြစ်ကောင်း, ဒါကိုကလစ်နှိပ်ပါ - ဘာမှအကြောင်းကိုပိုမိုအောင်မြင်သောဖြုတ်အကြောင်းကို message မပြောပါဘူး "Next ကို" ဆက်လက်။
တနည်းကား, ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "Next ကို".
ဒီအဆင့်မှာကနောက်ထပ်ပြဿနာများအတွက် check လုပ်ပေးပါတယ်။ စည်းကမ်းကြောင့်သူတို့ကိုရှာမထားဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ကွန်ပျူတာကို Microsoft ကထဲကနေရုံး applications များတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အစုကို, သူတို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိပါတယ်လျှင်မူကား, မဟုတ်ရင်အားလုံးအတွက် Microsoft Office ကိုစာရွက်စာတမ်းပုံစံများနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထားသူတို့ကိုတက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပြဿနာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ uninstall လုပ်သည့်အခါလျှောက်လွှာကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
အခုတော့ Office 365 ကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်, ကြာကြာသင်နှောင့်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးကိုအစားထိုးအဖြစ်ကျနော်တို့အခမဲ့ဖြေရှင်းချက် LibreOffice သို့မဟုတ် OpenOffice အဖြစ် Google Web applications များစာရွက်စာတမ်းများပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: LibreOffice နဲ့ OpenOffice ၏နှိုင်းယှဉ်
Remove ရုံး 365 အချို့အခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ဒီအခက်အခဲကျော်လွှားတပ်ဖွဲ့များမဟုတ်ပင်တစ်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူ။